Fantsom-baravarankely avo lenta amin'ny famonosana fantsom-barotra vita amin'ny famonoana varahina
Ny mpanamboatra fitaovana dia maniry hahatratra ny automatique amin'ny dingan-dry zareo ao anaty dokazy. Ny tanjon'izy ireo dia ny hahafahana manentana fantsom-barotra vita amin'ny fantsom-barotra otomotika varahina. Nanao fitsapana maromaro izahay hisafidianana ny tsara indrindra entana fanafanana induction izay mety mifanaraka amin'ny zavatra ilain'izy ireo.
Ny HLQ automatique rafitra fanetren-tena azo ampiasaina amin'ny paikadiny manokana
DW-UHF-20KW milina fanosihosy famokarana basy
Ny DW-UHF-20KW dia tonga miaraka amin'ny rafitra manafana fampidirana 20kw. Mahery io vahaolana fametrahana avotra azo ampidirina amina vokatra famokarana tsara.
Fitaovana: milina fanidiana induction DW-UHF-20KW
Fotoana: 12 seg.
Ny sandry robotic dia mihetsika miaraka tsara tsara ary mamela fifehezana tanteraka amin'ny fizotran'izany. Ny peratra alloy dia mitsonika ary miforitra amin'ny tonon-taolana rehetra. Ny iray tonta dia omena fahafaham-baraka mandritra ny 12 segondra.
Sokajy Technologies Tags fivarotana automatique, fivarotana varahina manimba, fantson-tsolika famonoana varahina, induction brazing, induction brazing automotive, fivarotana varahina manondraka, fanodinana famonoana enta-mavesatra, varahina famahana varahina Post Fikarohana
Fantsona famonoana fantsona
Induction vying Stainless Steel Tubing Joints
Fanamafisana mialoha ny induction automotif transaxle